ciidmada Kenay oo dad shacab ah ku xasuuqay gudaha Soomaaliya |
ciidmada Kenay oo dad shacab ah ku xasuuqay gudaha Soomaaliya
Silfar without prescription, Zoloft withoutprescription. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeymo khasaara dhaliyay ka geysteen gudaha degmada Jilib iyo hareeraheeda.
Wariyaal ku sugan Jilib ayaa soo sheegay in 6 qof ay ku dhaawacmeen duqeymaha oo 2 kamida yihiin haween madaafiic ay tuureen diyaaradaha miigaga Kenya.
Mid kamida dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in duqeymaha badankood ay ku dhaceen dhulka beeraha ee dhaca duleedka degmada Jilib.
Mas’uuliyiin katirsan maamulka Islaamiga Jilib oo shacabka dhibaateysan ugurmaday ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee dhaawacyada ay wanaagsantahay islamarkaana lagula tacaalayo goobaha caafimaadka Jilib.
Waa Markii 2-aad oo diyaaradaha Kenya ay duqeeyaan duleedka Jilib isbuucan gudihiisa ayay aheyd markii ay duqeymo sidaan oo kale ah ku dhaceen dadka deegaanka,cidamada Kenya ayaa isku dayaya in xanuunkii kasoo gaaray dagaalkii Mandheera ay ka aarsadaan shacabka soomaaliyeed ee marasta.